Dib u eegis Foomka WS: Foom Plugin awood badan oo dabacsan | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Dib u eegis Foomka WS: Foom Xoog leh oo Dabacsan
Ma waxaad raadineysaa plugin foomka ugu fiican ee bogaggaaga WordPress? Dib u eegista Foomka WS, waxaan si faahfaahsan u eegi doonaa mid ka mid ah kuwa cusub.
In kasta oo goobta suuqa ee qaabka WordPress uu yahay mid aad u camiran, Foomka WS ma aha oo kaliya nuqul-cat kale…
Waxay leedahay waxyaabo gaar ah oo socda kuwaas oo kaa caawinaya inaad abuurto noocyo badan oo foomam ah. Haddii aad tahay horumariye/ isticmaale koronto, waxaad si gaar ah ugu raaxaysan doontaa astaamo ay ka mid yihiin console-ka cilladaha wax-ka-qabashada, ogaanshaha qaab-dhismeedka tooska ah (tusaale Bootstrap), iyo inbadan.
Aynu qodno sababtoo ah waxaa jira wax badan oo dabooli kara…
Dib u eegista Foomka WS: Liiska Tilmaamaha (Si kooban!)
Waqti dheer kuma qaadan doono halkan sababtoo ah nuqul suuqgeyneed ayaa horey u daboolay sifooyinkaan waxaadna arki doontaa iyaga si faahfaahsan markaad wax akhrido, laakiin si aad u dejiso marxaladda, qaar ka mid ah sifooyinka asaasiga ah waa:
Dhise-dhicidda foomka dhisaha
Naqshad fudud oo jawaab celin ah
Caqli -gal shuruudaysan
Ka dib badbaadinta ama soo gudbinta falalka (ama falalka uu kiciyay macquul shuruudaysan)
Ku arag soo gudbinta foomka dashboardka WordPress
Dabagalka qaab beddelka ee ku dhex jira
Tilmaamaha u hoggaansanaanta GDPR
Shaqeynta eCommerce (tusaale ku aqbal lacagaha foomamkaaga)
Isku dhafka Zapier, adeegyada suuqgeynta iimaylka, Slack, iyo in ka badan.
Tilmaamaha horumariyaha, sida console-ka cilladaha leh ee cajiibka ah
Qiimaha Foomka WS
Waxa jira nooc bilaash ah oo xaddidan oo ah Foomka WS oo laga heli karo WordPress.org.
Kadib, waxaa jira laba siyaabood oo aad ku dari karto shaqeyn dheeraad ah.
Marka hore, waxaa jira nooca WS Form Pro ee udub-dhexaadka ah, kaas oo ku siinaya inaad marin u hesho dhammaan noocyada goobta iyo astaamaha kale ee qaaliga ah. Nooca Pro waa kharash:
$40 oo ah shatiga hal goob oo aan lahayn wax lagu daro
$250 ee goobaha aan xadidnayn iyo dhammaan waxyaabaha lagu daro.
Haddii aad iibsato hal-goob ah WS Form PRO, waxaad ku sii kordhin kartaa wax-ku-darka gaarka ah $20 midkiiba. Wax-ku-daradaasi waxay ku siinayaan gelitaanka isku-dhafka adeegyada suuq-geynta iimaylka, albaabbada lacag-bixinta, iyo in ka badan.
Ku-qabsiga Foomka WS: Dejinta Plugin-ka
Ka dib markaad rakibto oo aad dhaqaajiso plugin Form WS, waxay ku siinaysaa saaxirkan yar ee wanaagsan kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku habboonaato isdhexgalka iyada oo ku saleysan heerka aqoontaada:
Iyadoo ku xiran sida aad uga jawaabto su'aasha koowaad, waxaad ka heli doontaa doorashooyin kala duwan shaashadda soo socota.
Tusaale ahaan, haddii aad doorato Ka dhig Waxaa Simple or Waan Aqaannaa, waxaad heli doontaa muuqaal yar oo sharraxaya oo ku tusinaya sida foomamka loo sameeyo:
Dhanka kale, haddii aad doorato Waxaan ahay Horumariye, waxaad heli doontaa degdeg ah si aad u doorato qaabkaaga ka hor fiidyaha (tusaale Bootstrap, Foundation. Ama, waxaad odhan kartaa inaadan isticmaalin mid):
Faa'iidada halkan waa in Foomka WS uu soo saari karo foomamka adoo isticmaalaya qaabkaaga si looga fogaado CSS aan loo baahnayn.
Waa shay yar - laakiin waxaan jeclahay fiiro gaar ah halkan.
Samaynta Foom leh Foomka WS
Markaad tagto si aad u abuurto foom cusub oo wata Foomka WS, waxa ugu horreeya ee aad arki doonto waa liiska qaababka la heli karo.
Tani waa muuqaal aan jeclahay qaabka plugins, maadaama ay meesha ka saarayso darnaanta ku darista beeraha aasaasiga ah ee foom kasta u baahan yahay.
Qaababka WS Form waxa loo qaybiyaa saddex tab:
Warside is qor
Foomka iibsiga guud
Dalabka kaadhka hadiyadda
Codsiga tirtirka xogta
Codsiga dhoofinta xogta
Labadan u dambeeya runtii aad bay ugu anfacayaan inay kaa caawiyaan inaad u hoggaansanto GDPR.
Dabcan, waxaad had iyo jeer dooran kartaa inaad ka bilowdo template maran, sidoo kale.
Interface-ka Sameeyaha Foomka
Foomka WS waxa uu ku siinayaa isdhexgal jiid-iyo-jiid si uu kaaga caawiyo dhisitaanka foomkaaga. Waxaad arki doontaa dulmar foomkaaga bidix iyo liiska noocyada goobta la heli karo oo midigta ah:
Si aad ugu darto noocyada cusub ee goobta, kaliya jiid jiid. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa jiid-iyo-dhiibid si aad dib ugu habayso noocyada goobta jira.
Haddii aad rabto in aad habayso goob gaar ah, waxaad gujin kartaa Gear summada goobtaas oo waxay furaysaa liiska dejinta ee dhinaca midigta:
Dhammaan waxa quruxsan qiimaha caadiga ah ee plugin foomka WordPress illaa iyo hadda.
Laakiin Foomka WS runtii wuxuu halkan ku samaynayaa waxyaabo yaryar oo runtii nadiif ah.
Mid ka mid ah sifooyinka aan ugu jecelahay waa naqshadaynta jawaabta iyo xakamaynta tiirarka.
Marka hore, waxaad isticmaali kartaa slider-ka hoose si aad u beegsato meelaha goynta aaladaha gaarka ah ee qaabaynta foomkaaga:
Kadib, si aad u hagaajiso qaabka foomkaaga oo dhan ama goob gaar ah, waxaad isticmaali kartaa jiid-iyo-dhiibid si aad u dooratid inta tiir ee goobtu qaadanayso (sida sharoobada). Sida caadiga ah, waxaad heleysaa 12 tiir, in kastoo aad taas ku hagaajin karto goobaha WS Form:
Tani waa sifo run ahaantii hagaagsan - oo ah qaabka plugins ee aan isticmaalay, waxaan u maleynayaa in tani ay tahay nidaamka qaabeynta ugu fiican ee aan la kulmay.
Aynu qodno astaamo yaryar hadda…
Qaabka Goobta Goobta
Markaad tafatirto goob gaar ah, waxaad heli doontaa saddex tab:
The aasaasiga ah tab waa taas - dejinta aasaasiga ah sida haddii garoon loo baahan yahay, qiimaha caadiga ah / meeleeyayaasha, iwm.
Hal sifo oo wanaagsan halkan waa sifada gelitaan ku dhex jirta oo kuu ogolaanaysa inaad ku darto Summada ARIA:
The Advanced tab waxay kaa caawinaysaa ansaxinta, xaddidaadaha gelinta, iyo sifada kale ee horumarsan.
Tusaale ahaan, goobta lambarka talefanku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto maaskaro wax gelin ah si aad u maamusho zip code-ka.
Hal muuqaal oo fiican halkan waa inaad gujin kartaa liiska hamburger si aad u gasho qaar ka mid ah hor-u-dhigeyaasha waxtarka leh:
Ugu dambeyn, Xusuus-qor tab waa muuqaal aad u hagaagsan. Asal ahaan, waxay kuu ogolaanaysaa inaad qeexdo ikhtiyaarka soo jeedinta ee u muuqan doona marka booqde uu bilaabo wax ku qorida goobta:
Tusaalaha kore, waxaad arki kartaa inaan laba doorasho ku daray liiska xogta. Kadib, waa kuwan sida xulashooyinkaas ay uga muuqdaan dhanka hore:
Habkani waa mid aad u dabacsan - tusaale ahaan fudud eeyga waa uun xoqidda dusha sare. Wax badan ka baro maqaalkan caawinta
Foomamka bogag badan oo leh tabs
Si uu kaaga caawiyo abuurista foomam bogag badan, WS Form waxa ay isticmaasha tabs beddelka pagination-ka caadiga ah.
Waxaad ku abuuri kartaa tabsyadan qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka oo waxaad ku dari kartaa meelo kala duwan tab kasta:
Kadib, waxaad ku dari kartaa badhamada go'an ee loogu talagalay Tabkii hore or Tab xigta:
Kadibna dadku waxay riixi karaan tabs si ay gadaal-iyo-hor ugu dhaqaaqaan ama u isticmaalaan badhamada la go'ay:
Macquul Shuruudeed oo faahfaahsan
Haddii aad rabto inaad ku darto macquul shuruudaysan foomkaaga, waxaad isticmaali doontaa mid go'an Xaalad Xaalad ah sidebar, halkii aad ka dejin lahayd goobaha gaarka ah sida qaar ka mid ah foomamka plugins aad sameyso.
Si aad ugu darto macquul shuruudaysan, waxaad isticmaali doontaa mid fudud HADDII, HADDII KALE qaab dhismeedka (Waxaan sameeyay shaashad dhan walba si ay u sahlanaato in la arko):
Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa wax sida:
HADDII "Ma tahay Macmiil Cusub?" waxay la mid tahay "Maya"
Markaas qari meel foom gaar ah
KALE wax kale
Aaggan aad buu u faahfaahsan yahay sababtoo ah waxaad sidoo kale kartaa:
Ku dar shuruuc/ficilo badan mid kasta HADDII, MARKAA, ama qoraal kale
Ku dar shuruudo badan
Foomka WS wuxuu isku dayi doonaa inuu si toos ah u buuxiyo shuruudaha ELSE si uu kuugu fududeeyo adiga.
Ficilku waa sifo kale oo awood leh oo kuu ogolaanaysa inaad ku horumarto foomamkaaga.
Ficilada ayaa kuu oggolaanaya inaad sameyso waxyaabo ay ka mid yihiin:
Kicin beddelka Google Analytics ama Facebook
U dir emayl
Isticmaalayaasha dib u jiheeya
Orod qabka WordPress
Ku riix barta dhamaadka caadada
Waxaad ku kicin kartaa falalka laba siyaabood oo kala duwan:
Ka dib soo gudbinta foomka ama marka qof kaydiyo foom. Tusaale ahaan waxaad soo diri kartaa ogeysiis iimayl ka dib marka isticmaaluhu soo gudbiyo foom.
Iyadoo macquul ah shuruud. Markaa waxaad isticmaali kartaa isla weedhahaas HADDII/DAbadeed si aad u kiciso ficil halkii aad sugi lahayd qofka inuu soo gudbiyo foomka.
Laga soo bilaabo Tallaabooyinka interface, waxaad ku dari kartaa inta ficil ee loo baahan yahay:
Tusaale ahaan, haddii aad haysato diritaanka ficilka iimaylka, waxaad dooran kartaa cidda hesha iimaylka iyo waxa ku jira:
Ama haddii aad dooratid ficilka Dabagalka Beddelka, waxaad ku riixi kartaa macluumaadka dabagalka Dhacdada Google Analytics:
Dejinta Foomka aasaasiga ah
Marka laga soo tago goobaha faahfaahsan ee aan kor ku tusay, waxa kale oo aad helaysaa aag dejineed u gaar ah foomkaaga guud ahaan. Halkan, waxaad dejin kartaa waxyaabaha sida:
Xadka soo gudbinta
Xayiraadda soo gudbinta (tusaale ku dar taariikhda bilawga/dhamaadka ama waxaad u baahan tahay isticmaale inuu gudaha galo)
Hal sifo oo nadiif ah halkan waa Socodka goobaha. Kuwani waxay kuu oggolaanayaan inaad la socoto macluumaadka qaarkood ee ku saabsan foomka soo-gudbinta.
Tusaale ahaan, waxaad isku dayi kartaa inaad la socoto kooda:
Waxaan filayaa in tani ay tahay sifo kale oo waxtar u leh falanqaynta foomamkaaga.
Dib u noqosho fudud
Kani waa mid yar, laakiin Foomka WS waxa ku jira muuqaal dib-u-noqod/ku-noqosho oo faahfaahsan kaas oo kuu ogolaanaya inaad dib ugu booddo labada ficil ee shakhsi ahaaneed iyo taariikhda tafatirka oo dhan:
Foomka Dajinta Fudud
Ugu dambayntii, sifada kale ee ku haboon ee lagu dhisayo foomamkaaga waa qaabka debug form-ka WS.
Habkani karti ayuu u yeeshay, waxaad helaysaa qalabka wax-ka-qabashada kaas oo kuu ogolaanaya inaad si dhakhso leh:
Ku shub foomka
Soo gudbi foomka
Labadaas shay isku mar samee
Dib u soo deji/dib u daji foomka
Tani waa sifo aad waxtar u leh, gaar ahaan marka aad bilowdo gelitaanka foomamka horumarsan:
Ikhtiyaaryo Badan Oo Foomamka La Dhex-geliyo
Markaad dhammayso foomkaaga, waxaad ku dhejin kartaa adigoo isticmaalaya kood gaaban ama block u go'an tifaftiraha cusub ee WordPress:
Ka Eeg Soo Gudbinta Foomka iyo Falanqaynta Laga soo bilaabo Dashboardkaaga WordPress
Markaad daabacdo foomamka qaarkood, waxaad arki kartaa dhammaan foomamka la soo gudbiyay ee ku jira dashboardkaaga WordPress (marka lagu daro helida ogaysiisyada iimaylka ee ficiladaada qaab ahaan):
Marka laga soo tago, waxaa jira sifadan kuu ogolaanaysa inaad aragto heerka beddelka foomamkaaga, kaas oo aan filayo inuu weyn yahay:
Fikradaha ugu dambeeya ee Foomka WS
Markii ugu horeysay ee aan eegay Foomka WS, waxaan ka yara shakiyay. Waxaa horeyba u jiray tiro badan oo ah plugins qaab WordPress ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay sameynayaan waxyaabo isku mid ah oo heer aasaasi ah.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii aan ku ciyaaray agagaarka Foomka WS, aad ayaan ula yaabay sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay ku jirto qaar ka mid ah sifooyin waaweyn oo badi noocyada kale ee plugins aysan haysan.
Tusaale ahaan, aad ayaan u jeclahay sida ay ugu dhawaadeen nashqad jawaab celin leh oo leh slider-ka hoose, iyo nidaamka grid wuxuu fududeeyaa in la xakameeyo qaabka foomkaaga qalabyo kala duwan.
Waxaan sidoo kale jeclahay habka WS Form uu u wajaho macquulka iyo ficillada shuruudaysan. Iyadoo laga yaabo inaysan ahayn habka ugu saaxiibtinimo badan ee wax loo qabto aan sugnayn Isticmaalayaasha, waxaan u maleynayaa in isticmaaleyaasha awoodda ay qadarin doonaan inta dabacsanaanta aad u leedahay inaad dejiso macquulnimada iyo ficillada shuruudaysan.
Intaa waxaa dheer, qalabka debug waa weyn waxtar u leh tijaabinta foomamkaaga - Waxaan jeclaan lahaa in dhammaan foomamka lagu daro wax sidan oo kale ah.
Sheeko dheer oo gaaban - Foomka WS maaha qaab kale oo nuqul ka sameysan ah - waxaa hubaal ah in ay isku dayeyso in ay horumariso sida noocyada kale ee plugins ay u wajahaan waxyaabaha.
Haddii aad raadinayso xal aad ku abuurto foomamka WordPress, gaar ahaan foomamka noocyada aadka u adag, sii WS Form muuqaal.
Hel Foomka WS